Zvimwe Zvekutengesa Show Inoratidza Fekitori | China Zvimwe Zvekutengesa Ratidza Zviratidzo Vagadziri uye Vatengesi
CFM-B2F (bhizinesi kufekitori) & 24-Hour Nguva Yekutungamira
My Orders Kupinda Bhalisa
Chitoro chedu chepamhepo chinowanikwa:
Chiitiko Ratidza Zvigadzirwa
Yakagadzirwa Tafura Inovhara
Standard Tafura Inovhara
Tambanudza Tafura Inovhara
EZ Tube Popup Ratidza
EZ Tube Banner Mira
Jira Popup Anoratidza
Nhanho uye Dzokorora Yemashure
Makakatanwa Jira Ratidza
Zvimwe Zvekutengesa Zviratidzwa
Tsika Pole Mireza
Yakatarisana mativi ekudhinda mureza
Tsika Yakadhindwa Ruoko Sleeve
Tsika Yakadhindwa Bhanana
Tsika Yakadhindwa Headwear
Tsika Dzakadhindwa Scarves
Tambanudza Tafura Inovhara neO ...
Mucheka Banner Mira- Premium
10 × 10 Rakazara Ruvara Rakadhindwa Ad ...
Tafura yepamusoro Mapepa
Iyo Tafura yepamusoro Banner inowanikwa mune 6 'uye 8' sarudzo ine tsika yakadhindwa pamusoro-petafura banner kuratidza. Yako logo uye magirafu zvakadhindwa pane yakatambanudzwa machira banner iyo yakadhinda ako magiraidhi mune yakajeka hupenyu uye kubata vanhu kutarisa.
Rollup ndeimwe yenzira dziri nyore uye inowanzo shandiswa ekuratidza maturusi pakati pezvose zvigadzirwa zvekushambadzira. Izvo zvakanaka zvekutaurirana mameseji kana kushambadzira zvigadzirwa. CFM inopa mhando mbiri dzemaketuru esarudzo yako, yakajairwa mhando uye yekutanga imwe. Iyo mifananidzo ndeimwe single layer.
Kana iwe uchida kutsvaga zvimwe zvinhu izvo zvisinga gone chete kuratidza yako kambani kana zvigadzirwa, asi zvakare ive inoshanda uye inoshanda, popup booth inofanirwa kuve sarudzo huru. Iine yepamusoro yepamusoro, iyo popup booth inogona kupihwa sechigadzirwa kuratidza shefu uye zvakare inogona kushandiswa seye rostrum. Pamusoro, iwe unogona kupurinda iyo mifananidzo, masogani uye mabhureki sezvaunoda.
Tora Zvakadzama Mitengo